Arambha: April 2011
प्रधानमन्त्री खनालको विश्वास
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्ति प्रकि्रयालाई टुंगोमा पुर् याउन र संविधान जारी गर्न दलहरुबीच सहमति भए बांकी समयमा संविधान जारी हुनसक्ने दावी गर्नुभएको छ । प्रथम महिला सगरमाथा आरोहि पासाङ्ल्हामु शेर्पाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको १८ औं वार्षीकोत्सवको अवसरमा काठमाडौमा आज भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री खनालले संविधान जारी भएपछि मात्र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास संभव हुने स्पष्ट पार्नुभयो । वर्तमान सरकारको मुल कार्यभार शान्ति र संविधान लेखन भएको वताउदै प्रधानमन्त्री खनालले मुलुकलाई संक्रमणकालबाट मुक्त गर्न दलहरुबीच एकता जरुरी रहेको विचार ब्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री खनालले राजनीतिक संक्रमण नटुंगीएसम्म आर्थीक तथा सामाजीक क्षेत्रको विकास असंभव रहेको पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री खनालले पासाङ्ग ल्हामु कलेजका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो ।
Posted by Prakash Giri at Saturday, April 23, 2011 No comments: Links to this post
परेवा उडाएर संविधान वनाउने कामना
निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न नेताहरुलाई दबाब दिन नेपाल परेवा पालक संघले १२ औं परेवा उडान प्रतियोगिता गरेको छ । प्रतियोगिताको आज काठमाडौमा बौद्ध भिक्ष्ाले शान्तिको पाठ गरेपछि उद्घाटन गरिएको हो । दिगो शान्ति बहालीको कामना गर्दै परेवा पालक संघले २०५७ सालदेखि शान्तिको प्रतीक परेवा उडाउने कार्यक्रम गर्दै आएको छ । परेवा उडान प्रतियोगिता यही १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म साचालन हुनेछ । प्रतियोगितामा यस वर्ष २१ परेवा पालक सहभागी छन् । प्रतियोगितामा प्रथम द्धितीय र तृतीय हुनेलाई शिल्ड र प्रमाणपत्र दिइने छ ।
करिश्माको कटटुको अनौठो कथा
रातो राम्रो गुलियो मिठो वैंश छदा खेरि । यो पुरानो नेपाली गीत अझै पनि उतिकै चल्तिमा छ । खासगरि युवाहरु युवतीलाई जिस्काउदा यो गीत अझै पनि गुनगुनाउन पछि पर्दैनन ।
छिमेकका युवतीले कहिले पेन्टी देखाएर त कहिले पेन्टी नै नलगाए गुप्ताङ देखाएर दुनियालाई लुब्ध पारिरहेको खवर पढन पाउदा हामी नेपाली पनि कम रोमाञ्चित भएका थिएनौं । अनि यो खबर भन्दा यस संगै छापिएको फोटोको मोह त झन कति हो कति रु यो खवर पढदा हाम्रोमा त कम्तिमा यति धेरै मुख फुकेका मैयाहरु छैनन भनेर कहिले गर्व कहिले विरक्त मान्ने युवाहरुको जमात कम्ति थिएन नेपालमा । तर यसो भन्ने दिन पनि गए अब नेपालमा ।
गार्मेन्टमा काम गर्दा गर्दै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आएकि करिश्मा मानन्धर अहिले अभिनयको कारणले भन्दा पनि पेन्टी देखाएकै भरमा चर्चामा छिन । उमेरले ४० नाघेपनि अझै पनि युवाहरुलाई फकाउन उनले एक पटक रातो पेन्टी त अर्को पटक कालो पेन्टी देखाए र तिनलाई लुब्ध पार्ने कोशिश गरेकी छिन । यतिले मात्र नपुगेर उनले आफनो पुष्ट छातीमा रातो गुरासको पेन्टिङ पनि गरेकी छिन । अब केटाहरुलाई चैन मिलेको छ –किनभने तल हेरे पनि भयो अनि ढुक्कसंग करिश्मको गुरास हेरे पनि भयो । बरु यसरी हेर्ने युवाहरुलाई रातो राम्रो होला कि कालो कुन्नि ?
Posted by Prakash Giri at Saturday, April 16, 2011 No comments: Links to this post
भुटानले वार्ता समिति सकि्रय वनाउने
भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे वाइ थिन्लेले द्धिपक्षिय वार्ता गरेर भुटान छाडेर नेपाल आएका आफ्ना वास्तविक नागरिकलाई फिर्ता लान सकिने बताउनुभएको छ । तीन दिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किने क्रममा भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेले छिट्टै द्धिपक्षीय वार्ता थाल्ने सहमति भएको र कति शरणार्थी फिर्ता लाने भन्ने बारे चांडै निर्णय गर्न सकिने पनि बताउनुभयो । २०६० कार्तिक ३ गतेदेखि अवरुद्ध भएकॊ नेपाल भुटान-संयुक्त दिपक्षीय वार्ता समितिलाई सकि्रय बनाउने सहमति भएको पनि थिन्लेले जानकारी दिनुभयो । दक्षिण एसीयाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका भुटानी प्रधानमन्त्रीले व्यापार वाणिज्य पर्यटन जलबायु परिवर्तनका विषयमा नेपाली समकक्षीसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा साचारकर्मीले शरणार्थीको संख्या बारे प्रश्नगर्दा थिन्ले ८० हजार शरणार्थी छन् भन्ने बारे आफ्नो सरकारलाईलाई थाहै नभएको भन्दै पन्छिनु भएको थियो । शरणार्थीका विषयमा नेपालले चासो देखाउँदै आएपनि भुटानी पक्ष यस विषयमा उदासीन बनेपछि नेपालमा रहेका करिव ४४ हजार भुटानी शहरणार्थी विश्विका विभिन्न मुलुकमा स्थानान्तरण भइसकेका छन् । सन् १९९० देखि कूल जनसंख्याको २० प्रतिशत नेपाल भाषीलाई भुटान सरकारले बलपूर्वक देश निकाला गरेको थियो ।
कहाँ छ शान्ति ?
काठमाडौको बसुन्धरामा आज विहान पाकिस्तानी दुतावासका एक कर्मचारी माथि गोली प्रहार भएको छ । घटनास्थलबाट प्रहरीले बा।१६ प को ९०४५ नंवरको कालो स्प्लेन्डर नियन्त्रणमा लिएको छ । बसुन्धरा पोलीक्लिनीक अगाडी पैदल िहंडेर आएका दुई जनाले गोली चलाएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ । पाकिस्तानी दुतावास जांदै गरेका मेहवुव आसिफलाई तीन गोली लागेको र उनको ओम अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । घाइते मेहवुव दुतावासको राहदानी शाखामा युडिसी जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका अधिकारी हुन् । प्रहरीले घटनास्थलमा चार राउण्ड गोली चलेको जानकारी दिएको छ । मेहवुवको पेटु पाखुरामा एक-एक गोली लागेको छ भने हेलमेट लगाएकाले टाउकोमा हानेको गोली चिप्लीएको थियो । गोली चलाए लगत्तै दुई युवाले मेहवुव चढेकै मोटरसाइकल लिएर भाग्ने प्रयास गरेका थिए । प्रहरीले अहिलेसम्म घटनामा संलग्न कसैलाई पक्रेको छैन । पछिल्लो एक सातामा काठमाडौमा गोली चलेको यो दोस्रो घटना हो । यसअघी काठमाडौकै खिचापोखरीमा गत साता एक भारतीय व्यापारीको हत्या भएको थियो । लगत्तै दुई दिन अघी मात्र मन्त्रीमा नियुक्त भएका गोकर्ण विष्ट माथि खुकुरी प्रहार भएको थियो । प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै पनि घटनामा संलग्नलाई पक्रेको छैन ।
Posted by Prakash Giri at Wednesday, April 13, 2011 No comments: Links to this post
नेपाल हङकङसंग पराजित
एसीसी महिला टी-ट्वान्टी कि्रकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलबाट नेपाल वाहिरिएको छ । कुवेतको हुवारा कि्रकेट मैदानमा भएको सेमिफाईनल खेलमा नेपाल हङक...